The # 1 Ajụjụ Injin Nchọpụta Ọrụ Na-ajụ Banyere Azụmaahịa Gị | Martech Zone
Na 2014, n'ime nyocha niile na Google, otú bụ okwu # 1 nke ndị ọrụ nyocha nchọ ihe jiri. Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla erere gafee answersntanetị na-aza a Kedu. Ajụjụ bụ ma ị bụ ebe ị na-aga maka ozi ha na-achọ.
Ọ bụrụ na ị bụ ihe ọ drinkụ drinkụ egwuregwu, olee otu ị ga-esi mee ihe banyere cramps, ma ọ bụ otu esi akwadebe ahụ gị maka mgbatị siri ike. Ọ bụrụ na ị bụ onye nchịkọta ụlọ ọrụ, otu esi abụ otu esi enyocha data nke ọma iji weghachite data ntinye ego maka mkpọsa gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye onye mmebe ihe omuma, kedu ka ị ga - esi họrọ otu na - eweta ọrụ ma ọ bụ otu aga - esi kwalite nkwupụta ozi nke ọma.
Fọdụ ụlọ ọrụ anaghị ekwu okwu otú n'ihi na ha na-echegbu onwe ha banyere itinye nzuzo nzuzo ha n'ịntanetị. Ọ bụ mma agha ihu abụọ nke m kwenyere n'onwe gị na ị na-emerụ onwe gị ahụ. Ọ bụrụ na ị naghị ekpughe etu, ndị asọmpi gị nwere ohere. Inwe ike zuru ezu inwale otú ha dozie nsogbu ahụ na-enye ha uru asọmpi.
Na n'oge a, ọ bụrụ na ị kwenyeghị na ndị mmadụ na-enyocha ihe ha ga-azụta enweghị ike ịchọta otú ị na-eme ya, ị bụ delir. Ọ ga - akara m mma ide banyere otu anyị ga - esi dozie nsogbu ma dozie nsogbu maka ndị ahịa anyị karịa ka ndị asọmpi anyị dozie onyinye anyị na - ezighi ezi. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe anyị hụrụ na-eme na ụlọ ọrụ anyị.
Yabụ, ka ị na-akwado atụmatụ 2015 maka ụlọ ọrụ gị, enwere ọtụtụ Olee ajụjụ ị nwere ike ịza n'ịntanetị.
Kedu ịhọrọ onye na-ere (na ihe kpatara ị ji dịrị gị mma).
Kedu iji kwado ihe efu (na ikekwe otu ị si adị ọnụ ala).
Kedu iji nyochaa ihe ngwọta (na otu azịza gị si kwekọọ).
Kedu idozi nsogbu (na-enweghị na na gị ngwọta ịghọta ihe dị iche ị na-eme).
Kedu ụlọ ọrụ na-agbanwe (na ị na-anọ n’elu).
Kedu ihe ndi ozo (aku na uba, talent, teknụzụ) na-emetụta azịza ya.
Kedu I tozuru oke ịza (asambodo, ụkpụrụ, akụrụngwa).
Kedu ọtụtụ ihe ọ chọrọ (yana otu ị ga-esi belata ya).
Kedu Ego ole ka ọ na-eri (na otu ị si akwụ ụgwọ ya nke ọma).
Ihe kachasị mkpa banyere ịza ajụjụ Olee ajụjụ bụ na ị nwere ike ịkwado ụlọ ọrụ gị nke ọma, ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị iji nyere aka na ngwọta ahụ. Chọpụta, ọ bụrụ na ị na-aza otú ịwụnye osisi siri ike, mmadụ nwere ike kpebie ime ya n'onwe ya. Ma dị irè otú edemede ga-abanye n'ime nkọwa zuru oke iji nye ihe kpatara na ọ bụ echiche kacha mma ịnweta ọkachamara.
DIY agaghị eji ọrụ gị rụọ ọrụ ọ bụla, ị na-esote onye ahụ nke na - enyocha otu esi sie ike.
Tags: azịzaotúkedu azịzaotú ihe atụOlee ajụjụotúAjụjụ ọchụchọ
Jenụwarị 13, 2015 na 10:07 PM
Daalụ, Douglas, maka ịkekọrịta ndepụta a na-akpali iche echiche nwere ike "otu esi" ekike ọdịnaya; o nyere m ọtụtụ nke ukwuu echiche!
Jenụwarị 13, 2015 na 11:24 PM
Na-nnọọ nnabata Joanna! Daalụ maka iwepụta oge iji kwuo okwu!